babimild, Author at Babi Mild Moms Club - Page6of 34
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၂၄)
အာဟာရပြည့်ဝစွာ မစားသုံးတတ်သဖြင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုအမျိုးမျိုးကို အထူးသဖြင့် ကလေးသူငယ်များ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်နှင့် နို့တိုက်မိခင်များ အများဆုံးခံစားရပြီး အသက်ပါဆုံးရှုံးသည်အထိ အန္တရာယ်ရနိုင်သည်။ သာမန်အမျီုးသမီးတစ်ဦးအတွက် တစ်နေ့ အင်အားဓာတ် ၂၁ဝဝ ကယ်လိုရီ၊ ကြီးထွားဓာတ် ၆ဝ ဂရမ်၊ သံဓာတ် ၁ဝ မီလီဂရမ်နှင့် ဗီတာမင်အေဓာတ် ၅ဝဝဝ IU လိုအပ်သည်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင်စဉ် ပို၍လိုအပ်သော အာဟာရများမှာ ကယ်လိုရီ ၂ဝဝ၊ ကြီးထွားဓာတ် ၂ဝ ဂရမ်၊ သံဓာတ် ၅ မီလီဂရမ်နဲ့ ဗီတာမင်အေ ၁ဝဝဝ IU တို့ဖြစ်သည်။ နို့တိုက်မိခင်တစ်ယောက်သည် ကိုယ်ဝန်ဆောင်မိခင်ထက် အာဟာရဓာတ် ပိုမိုလိုအပ်သည်။ ကယ်လိုရီ ၁ဝဝဝ၊ ပရိုတင်း ၄ဝ ဂရမ်၊ သံဓာတ် ၁ဝ မီလီဂရမ်၊ ဗီတာမင်အေ ၁ဝဝဝ IU […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၂၃)
မေး။ ။ ကလေးအစာစားအောင် ဘယ်လိုကျွေးရမလဲ။ ဖြေ။ ။ ကလေးတွေကို အစာစကျွေးစမှာ ဇွန်းနှင့် ခွံ့ကျွေးရပါမယ်။ ဝါးကျွေးတာ မကောင်းပါဘူး။ ဝါးသူရဲ့ ပါးစပ်က အညစ်အကြေး၊ ပိုးမွှားတွေပါတတ်ပါတယ်။ ပိတ်စိမ်းပါးနှင့် တိုက်ကျွေးရာမှာလည်း ပိတ်စိမ်းပါးကို လှမ်းတဲ့အခါ ယင်ကောင်နားနိုင်လို့ မသန့်ပါ။ ဇွန်းနှင့် အစာကိုချေပြီး အထက်ဖော်ပြပါအတိုင်း အရသာရှိအောင် ပြင်ဆင်ကျွေးစေချင်ပါတယ်။ ကလေးတွေကို ကျွေးရာမှာ ဇွန်းနှင့် ပါးစပ်ဖျားတွင် ထည့်ကျွေးပါက ထွေးထုတ်တတ်ပါတယ်။ လျှာအလယ်နားရောက်အောင်ထည့်ကာ ထွေးထုတ်ဖို့ခက်ပါတယ်။ လူကြီးတွေက ကလေးကို ပတ်လက်ပွေ့ထားပြီး သို့မဟုတ် ခြေဆင်းပြီး ကလေးကို လူကြီးခြေအစုံပေါ်တင်ထားပြီး ခေါင်းကို လူကြီးဘက်လှည့်ထားပြီး ကျွေးတတ်ပါတယ်။ အဲဒါလည်း ကလေးရဲ့ လျှာအနောက်ပိုင်းကို တစ်ခါတည်း ထည့်ပေးလိုက်တဲ့ သဘောပါပဲ။ ဒါတောင် တစ်ခါတစ်လေ အော့ထုတ်တတ်ပါတယ်။ ကျွေးတဲ့သူက […]
ဘေဘီလေးတို့အရေး ဆွေးနွေးရအောင် (အပိုင်း-၂၂)
မေး။ ။ ဖြည့်စွက်စာကျွေးတဲ့အခါ ဘာတွေကျွေးရပါမလဲ။ ဖြေ။ ။ ဖြည့်စွက်စာကျွေးတဲ့အချိန် အသက်(၆)လမှာ သွားငုတ်တုတ် လူငုတ်တုတ်ဖြစ်၍ သွားလေးချောင်း၊ နှစ်ချောင်း ပေါက်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပျော့ပျော့နှင့် အစာကြေလွယ်သော အစာကို ကျွေးရပါမယ်။ ထမင်းရည်ပျစ်ပျစ် စကျွေးပါ။ မနက်တစ်ကြိမ်၊ ညတစ်ကြိမ် ကျွေးလို့ရပါတယ်။ ဆား၊ သကြားနည်းနည်းနှင့် နို့မှုန့်ရောပြီး ကျွေးလို့ရပါတယ်။ နို့လိုမျိုး ရှောရှောရှုရှု မျိုလို့မလွယ်တာကြောင့် ကလေးတွေ ထွေးထုတ်တတ်ပါတယ်။ ကြိုးစားပြီး ချော့မော့ကျွေးပါ။ အချိန်ပေးပြီး စိတ်ရှည်စွာ ကျွေးဖို့ လိုပါတယ်။ ဒီအချိန်မှာ ထမင်းရည်ပျစ်ပျစ် သောက်ရမယ်ဆိုတာ သိသွားဖို့ပါ။ လျှာဖျားလေးပေါ်တင်ပြီး ကျွေးရင် ထွေးထုတ်ရလွယ်တာကြောင့် လျှာအလယ်နားရောက်အောင် ကျွေးသင့်ပါတယ်။ ထမင်းရည်ပျစ်ပျစ်ကနေ ဆန်ပြုတ်ကျဲကျဲနှင့် ပဲနီကလေး၊ ပဲဝါကလေးရောပြုတ် သို့မဟုတ် ငါးဆန်ပြုတ်၊ အသားဆန်ပြုတ် တစ်မျိုးပြီး […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၂)
1. Mi Thu မင်္ဂလာပါဆရာ သမီးလေးက ရက်က ၁၇ ရက်သားပဲရှိသေးတယ်။ အမေနို့သီးခေါင်းက မရှိတော့ နို့ကိုညှစ်ညှစ်ပီးတိုက်နေရတယ်။ နို့က သိပ်မလိုက်ချင်တော့လို့ နို့မှုန့်ကူ ချင်လို့ ရပါသလား။ ဘယ်လိုနို့မှုန့် အမျိုးအစားကို တိုက်သင့်ပါသလဲဆရာ။ နို့မှုန့်ထက် မိခင်နို့က ပိုကောင်းပါတယ်… ဒါကြောင့် တတ်နိုင်သမျှ မိခင်နို့ကိုပဲ တိုက်ကျွေးဖို့ ကြိုးစားကြည့်ပါ… Flat Nipple ဖြစ်စေ၊ Inverted Nipple ဖြစ်စေ ကလေးကို စမ်းသပ်တိုက်ကျွေးကြည့်ပါ… အများအားဖြင့် ဒီလိုဖြစ်နေတဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ ကလေးကို မိခင်နို့ တိုက်ကျွေးရာမှာ အဆင်ပြေကြတာကို တွေ့ရပါတယ်… တိုက်ကျွေးတဲ့အခါ မိခင်နို့သီးခေါင်းရဲ့ အပြင်ဖက် Areola ထိ ကလေးရဲ့ ပါးစပ်ထဲကို ရောက်အောင် ပြုလုပ်ပေးပါ… နို့သီးခေါင်း အနည်းငယ် စို့ရလွယ်အောင် […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၁)
၅.၁၂.၁၈ 1. Khin Lay ဆရာကလေးက ၆ နှစ်ကျော်သွားပြီ။ အဆုတ်အားနည်းတယ်။ ရင်ကြပ်လည်းရှိတယ်။ ဘာအားဆေးတိုက်ရမလဲ အလင်းပြပေးပါဆရာ။ စနစ်တကျ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုတွေ လိုအပ်ပါတယ်… ဒါတွေမပါဘဲ ဆေးဝါးညွှန်းဆို ကုသလို့ အဆင်မပြေပါဘူး… ရင်ကြပ်ရှိတတ်ရင် ကလေးနဲ့ ဓါတ်မတည့်တဲ့ အစားအစာ၊ အနံ့အသက်စတာတွေကို လေ့လာမှတ်သားပြီး ဒါတွေနဲ့ တတ်နိုင်သမျှ ထိတွေ့မှု မရှိအောင် ဂရုပြုပေးသင့်ပါတယ်… ကျန်းမာပျော်ရွှင်ပါစေ Dr.Mild —————————– 2. Chit Sone ၂ လခွဲကလေးက တစ်နေ့ ဝမ်းဘယ်နှစ်ကြိမ်သွားရင် ပုံမှန်လဲ ဆရာ။ ဝမ်းက အရည်များများနဲ့သွားတာကော ပုံမှန်လား သိချင်ပါတယ်ဆရာ။ ကလေးတွေ တစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ဝမ်းသွားတဲ့ ပုံစံမတူညီကြပါဘူး… အထူးသဖြင့် ၆ လအောက် ကလေးငယ်တွေမှာ ဝမ်းသွားပုံက […]
ဒေါက်တာ Mild နှင့် အမေးအဖြေ (အပိုင်း – ၁၃၀)
25.11.18 1. Hla Swe သမီးက ၂ လပါဆရာ။ လျှာမှာ တော်တော်ထူတဲ့အဖြူကွက်ရှိနေပါတယ်။ တချို့က မှတ်ခရုလို့ပြောပါတယ်ဆရာ။ နို့ကောင်းကောင်းမစို့ပါဘူးရှင်။ ကျေးဇူးပြု၍ဖြေကြားပေးပါရှင့်။ လျှာမှာ အဖြူတွေ ကပ်နေတာမျိုးရှိရင် သွားပွတ်တံ နုနုလေးနဲ့ (သို့) အဝတ်ကို ရေနွေးနွေးနဲ့ စွတ်ပြီး သန့်ရှင်းပေးပါ… မိခင်နို့ကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ အဖြူဖတ်တွေဆို အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားလို့ရပါတယ်… တကယ်လို့ အလွယ်တကူ ဖယ်ရှားမရဘဲ ကပ်နေရင်တော့ အတင်းမခွာပါနဲ့… မှိုကြောင့်ဖြစ်တတ်တဲ့ မက္ခရုလို အရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဒါဆိုရင်တော့ လိမ်းဆေးလိမ်းပေးရမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ရောဂါသေချာစေဖို့ ကလေးအထူးကု ဆရာဝန်နဲ့ ပြသပြီး အကြံဥာဏ် ရယူပါ… နို့ကောင်းကောင်း မစို့တာက အဲဒီ အဖြူကွက်တွေကြောင့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်… —————————– 2. မောင် ဖြိုး ဆရာရှင့် […]